Cafis waa caafimaad “Cafis iyo Masaamax” – Radio Muqdisho
Cafis waa caafimaad “Cafis iyo Masaamax”
Cafiska ayaa ah habka kaliya ee ugu fudud oo marka la sameeyo horay loo sii socon karo, laguna iloobi karo wax kasta oo horay u soo kala dhexmaray labo shaqsi, laba koox iyo wixii la mid ah, sidaasi darteed waxaa muhiim ah in qof kasta uu masuuliyad gaar ah iska saaro inuu hormuud u noqdo iscafinta dadka Soomaaliyeed.
Ilaa iyo 12-Malyan oo Soomaali ah, Xigto iyo Xigaal ah, isku Diin ah sidoo kalana isku Af ah, bal qiyaas haddii qof kasta uu qaato masuuliyad shaqsi ah oo uu Cafiyo walaalkiis maxaa dhicikara.? Jawaabtu waxay tahay inaan heli karno Soomaali isjecel oo mid ah.
Haddaba si aan u gaarno haddafkaas waxaa muhiim ah Qof kasta oo Akhriya warbixintaan ama ay gaarto inuu iska billaabo masuuliyad ah inuu Cafiyo cid kasta uu dhib ka tabanayo Alle dartiis, asna uu cafis waydiisto qof kasta uu aaminsanyahay inuu dhib u gaystay.
Marka aad Cafiso walaalkaa ama koox badan oo dhib kuu gaysatay adiga oo aanan ku raadinayn dan gaar ah laakiin go’aankaas u qaatay Alle dartiis, waxaad helaysaa caafimaad, Qalbigaana wuxuu nadiif u noqonayaa sida Looxa marka qadda laga mayro, laakiin marka aan u wada istaagno dhammaanteen Cafis waxaan noqon doonaa ummad wada caafimaad qabta oo si caafimaad qab ah dunidda oo dhan ula jaanqaada.
Dadka Soomaaliyeed waxay soo mareen xiliyo adag, waxaa soo dhacay wax badan oo aanan qurxoonayn, laakiin maanta ayaa la-joogaa xilligii la-laabi lahaa baalkaas sidoo kalana la furi lahaa baal cusub oo aan ku qori karno CAFIS IYO MASAAMAX.
28-ka Bishaan June qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka dalka iyo dalka dibadiisa ayaa waxaa ka dhici doona isku soo baxyo lagu muujinayo muhiimadda iscafiska iyo sida loogu baahanyahay in haatan dadka Soomaaliyeed oo dhan iswada Cafiyaan.
Maxamed kaafi Sheekh Abuukar
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan Ururka 89-aad.+sawirro